Personalities & Profiles: Kelley Slagle | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Personalities & profiles: Kelley Slagle
Kelley Slagle (loharano: Roy Cox Photography)
2019 Kat Show New York Profiles dia andiana dinidinika miaraka amin'ireo matihanina malaza amin'ny sehatry ny fampielezam-peo izay handray anjara amin'ity taona ity Kat Show New York (Oct. 16-17).
Kelley Slagle dia mpamokatra horonantsary ary mpamoaka lahatsoratra amin'ny lalam-piofanana, indostrialy ary rakitra fanadihadiana ho an'ny mpanjifa orinasa sy tsy mitady tombony fa anisan'izany ny LinkedIn Learning, Canon, FINRA, ary Adorama. Kelley dia mpandahateny amin'ny hetsika ara-indostria ao anatin'izany Kat Show ary mpanoratra ny kilasy roa ao amin'ny LinkedIn Learning. Mpanampy mpanampy amin'ny National Geographic izy ary nandany 12 nandritra ny fampivoarana rindrambaiko niaraka tamin'ny National Public Radio. Kelley dia mitantana sy manamboatra ary manova ny sarimihetsika mahaleo tena sy fitadiavana sary miaraka amin'ny orinasa, Cavegirl Productions. Afaka mianatra bebe kokoa momba Kelley sy Cavegirl Productions ianao ao cavegirl.com.
Nanana fotoana nifanaovana dinidinika tamin'ny mpilalao sarimihetsika sy ilay mpamokatra Kelley Slagle aho, nanomboka tamin'ny fomba fampahafantarana ny asany tamin'ny asany filmmaking. “Nanomboka nilalao tantara an-tsehatra aho tamin'ny taona 2000, ary nifindra tany amin'ny teatra matihanina kely kokoa tao DC. Mandritra izany fotoana izany dia nanomboka nahita ampahany tsy firaisana tamin'ny sarimihetsika mahaleo tena ao an-toerana aho. Nivoatra tamin'ny ampahany lehibe kokoa tamin'ny sarimihetsika indie, andian-tranonkala ary indostrialy izany ary taty aoriana dia lasa mpilalao SAG-AFTRA manana andraikitra amin'ny fahitalavitra sy sarimihetsika aho. Ny anjara toerako roa tiako indrindra amin'ny asako an-tsehatra ary ny iray izay reharehako indrindra dia ny nilalao ny asan'i Josie Volana ho an'ny Malala avy amin'i Eugene O'Neill, sy ny anjara asan'ny Hester Swane ao amin'ny lalao Avy amin'i Bog of Cats avy amin'i Marina Carr. Samy manana ny anjara toerany miaraka amin'ireo accent irlandey izy ireo, miaraka amin'ny fihetsiketsehana feno fientanam-po.
“Fony aho mpilalao sarimihetsika tamin'ny andian-tsarimihetsika mahaleo tena, lasa liana tamin'ny zava-nitranga tao ambadiky ny fakantsary aho sy ny nahatonga ny fikajiana napetraka. Izaho dia mpilalao sarimihetsika tamin'ny horonantsary 48 Hour Film Project [48hourfilm.com] ary nankafiziko ny fizotran'ny filma fohy nandritra ny faran'ny herinandro ka nanapa-kevitra ny hanangana ny ekipako 48HFP manokana ho an'ny taona manaraka, miaraka amin'ny tenako amin'ny famokarana / talen'ny mpamaky. Io ny toetoetrany tonga lafatra indrindra nandona ny tany nihazakazaka ary nianatra ny fototry ny filmmaking. Io no fanombohan'ny Cavegirl Productions, ary nandeha nanao horonan-tsary 12 izahay nandritra ny taona maro ho an'ny 48HFP. Nahavita horonantsary fohy maro izahay nandritra ireo taona maro izay nahafinaritra ahy indrindra ary nahafaly ahy tamin'ny vokatra farany, anisan'izany ny fanesoana momba ny zon'ny saribakoly, horonantsary mpihaza matoatoa milaza amin'ny fomba fijerin'ny matoatoa, ary iray izay nanombantombana momba ny asa izay mety ho azo. nandritra ny Apokalipsy zombie.
'Ny horonan-tsarimihetsika fisehoanay voalohany Ny Dice sy ny lehilahy dia tantara momba ny mpilalao roleplaying sy ny fisakaizany, ary nandresy festival festival sy loka hafa. Ny famokarana farany indrindra dia ny raki-tsary Mason'ny mpitazana: ny kanton'ny tranomaizina sy ny dragona, izay mijery ny tantara sy tantara ao ambadiky ny kanto izay nanampy tamin'ny famoronana lalao roleplaying malaza indrindra eran-tany. Nahazo loka ihany koa izy tao amin'ny fizaran-dahatsary festival ary mizara amin'ny sehatra streaming maro, ao anatin'izany ny iTunes sy Amazon.
“Mandritra ny fihetsika sy filmmaking ny hariva sy ny faran'ny herinandro, nandany 12 taona niaraka tamin'ny National Public Radio aho ho toy ny mpamorona tranonkala sy mpandalina QA miasa ao amin'ny toerana anaovany programa, ny Content Depot. Nanapa-kevitra ny hitady asa amin'ny sarimihetsika manontolo andro aho ary nanomboka niasa tao amin'ny National Geographic, ary nahazo traikefa manan-danja amin'ny maha-mpanampy Video Editor ao amin'ny Image Collection azy ireo nandritra ny herintaona. ”
Nanontany an'i Slagle aho hoe ahoana ny fomba nifandraisany tamin'ny NAB. "Nandritra ny niasako tao amin'ny orinasam-pifandraisana RHED Pixel, dia nangatahin'i Rich Harrington aho hanampy amin'ny fampianarana fotoam-pivoriana iray Kat Show any Vegas momba ny fitantanana ny fantsona YouTube anao. Izany dia mitarika fifandonana miteny hafa miaraka amin'ny NAB, farany hampiditra kilasy famokarana horonantsary tsy miankina, fidiram-bola, mpilalao sarimihetsika ary tsy mpilalao sarimihetsika, ary famokarana horonantsary fanadihadiana. Ny firesahana amin'ny NAB dia fotoana nahafahana nanararaotra tambajotra ary nanjary nisy fifandraisana sy fahafaha-manao asa aman-draharaha maro, miaraka amin'ny fampisehoana ny tsara indrindra omen'ny indostria. ”
Slagle dia hanao atrikasa roa, "Crowdfunding Your Independent Film" ary "Find the best Performance: Directing Actors and Non-Actors," amin'ny volana manaraka Kat Show New York. “Ny fampisehoana 'Crowdfunding Your Independent Film' dia natao ho an'ireo mpamokatra horonantsary mitantara sy mandroso indie izay mitady ny paikady tsara indrindra amin'ny fampiasana ireo sehatra fitadiavam-bola be mpampiasa mba hamatsy vola ny tetikasan'izy ireo. Hodinihiko ny sehatra natolotra, hitady sy hikaroka ny mpihaino anao, handamina ny fampielezan-kevitrao, hanaparitaka ny teti-bolanao, mamorona horonantsary fampielezan-kevitra, manolotra valisoa sy tombam-bidy, mampandeha ny fampielezan-kevitrao, ary manaraka sy hitazomana ireo mpandray anjara ho faly.
"Ny fahazoana ny fahombiazana tsara indrindra: ny fitantanana ny mpilalao sy ny tsy mpilalao" dia ho an'ny mpamokatra sy ny talen'ny asa amin'ny sehatra maro, ao anatin'izany ny fitantarana, ny fanadihadiana ary ny famokarana horonantsary orinasa. Ny fandaharam-pianarana dia handrakotra ny fandefasana, ny fanomanana, ny fifandraisana, ny famerenana an-tsehatra, ny fampisehoana, ny toro-hevitra momba ny fitifirana, ny fitantanana ireo tsy mpilalao sarimihetsika, ary ny torohevitra ho an'ny tranga manokana, toy ny fanadihadiana amin'ny fanadihadiana, miasa miaraka amin'ny vokatry manokana, ary ny fiaraha-miasa amin'ny ankizy. ”
Slagle dia be mitazona azy foana amin'ny manaraka Kat Show New York koa. "Izaho dia miasa ankehitriny amin'ny famokarana atiny fanazaran-tena ho an'ny NGP VAN, mpamatsy teknolojia mitarika amin'ny fampielezana demokratika sy fandrosoana ary fikambanana, ary eo am-pamokarana ao amin'ny fanadihadiana ao amin'ny Cavegirl Productions manaraka, fijerena ny lalao karatra varotra malaza indrindra, Tsy miraharaha ny hain-tany - Ny tantaran'ny majika: Ny fanangonana. "
2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News 2019 Kat Show New York 48 Hour Film Project Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana Cavegirl Productions Kelley Slagle Kat 2015 Kat 2016 Kat Show Kat Show 2016 Kat fampisehoana Careers NAB16 nabshow National Geographic NPR 2019-10-15
Previous: Ny Fikambanan-tsakafo sy ny fiarovana ny atiny dia mandefa ny volana niarovana ny atiny miaraka amin'i Bob Gold & Associates
Next: Ny rafitra maoderina an'ny FSR dia mametraka ny seho mandritra ny NECA 2019